I-Analytics iluthola kanjani lonke lolo lwazi? | Martech Zone
I-Analytics iluthola kanjani lonke lolo lwazi?
NgeSonto, ngoMashi 29, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kule mpelasonto bengilokhu ngicabanga (njengenjwayelo). Ngeke yini kube kuhle uma ungavula i-Google Analytics bese ubona ukuthi bangaki abantu abafunda okuphakelayo kwakho kwe-RSS? Ngemuva kwakho konke, lokhu kusesekuvakashelwa kwesiza sakho nokuqukethwe kwakho, akunjalo? Inkinga, yiqiniso, ukuthi ukuphakelwa kwe-RSS akuvumeli ikhodi ukuthi yenziwe lapho okuqukethwe kwakho kuvuleka (uhlobo). Ikhasi lakho lewebhu liyakwenza, noma kunjalo.
Uma ungathanda ukufunda kabanzi nge-Web Analytics, ngincoma incwadi eyodwa nencwadi eyodwa kuphela, Avinash Kaushik's incwadi, I-Web Analytics ihora ngosuku. I-Avinash ichaza ngokusobala isizathu esenza ukuthi sisuke ohlangothini lweseva analytics ohlangothini lwamakhasimende analytics kanye nezinselelo ngamunye.
Nasi isampula sesicelo sesithombe nokuhluka kombuzo:
douglas% 2520karr% 2520shiny% 2520izinto% 3B
Ngizamile ukuqoqa konke okuguqukayo kokubuza ngokucwaninga inqwaba yokuhlukile amawebhusayithi:
utmac = "Inombolo ye-Akhawunti"
utmcc = "Amakhukhi"
utmdt = "Isihloko Sekhasi"
utmfl = "Uhlobo lwe-Flash"
utmhn = "Cela igama lomethuleli"
utmn = "Inombolo engahleliwe - yenziwe ngakunye kwe- __utm.gif hit futhi isetshenziselwe ukuvimbela ukulondolozwa kwesikhashana kwe-gif hit"
utmp = "Ikhasi - imingcele yesicelo nekhasi"
utmr = "Umthombo obhekisa (i-url yokudlulisa | - | 0)"
utmsc = "Imibala Yesikrini"
utmsr = "Ukulungiswa kwesikrini"
utmt = "Uhlobo lwe .gif hit (tran | item | imp | var)"
utmul = "Ulimi (lang | lang-CO | -)"
utmwv = "Uhlobo lwe-UTM"
utmctm = Imodi Yomkhankaso (0 | 1)
utmcto = Isikhathi sokuqeda umkhankaso
utmctr = Isikhathi Sokucinga
utmccn = Igama Lomkhankaso
utmcmd = Umkhankaso Ophakathi (oqondile), (ophilayo), (akekho)
utmcsr = Umthombo Womkhankaso
utmcct = Okuqukethwe Komkhankaso
utmcid = I-ID Yomkhankaso
Angiqiniseki ngokumbalwa kwalokhu… futhi angazi ukuthi kukhona okuningi yini, kepha lokhu kuyasiza uma ufuna ukuhlanganisa kanye nesicelo sakho sesithombe ukubhalisa idatha eyengeziwe ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics - isibonelo… kwababhalisile bakho be-RSS!
Namuhla ngivivinya umbono wami… Ngisungule isicelo sesithombe sokuthi kufanele dlulisa ukusetshenziswa kwe-RSS ku-Google Analytics. Inselele eyiyo, ngoba alikho ikhukhi noma isikhombi sesicelo esithile. Obhalisile ayengakwenza vula okuphakelayo okufanayo bese ubhalisa ama-hits amaningi ku-Google Analytics. Ngizoqhubeka nokuthungatha, noma kunjalo, ngibone ukuthi ngingaqhamuka nokuthile okuqine kakhudlwana.
Nasi isicelo sami sesithombe… ngisebenzisa i- I-plugin ye-PostPost WordPress Ngisungule futhi ngabeka ikhodi ngemuva kokuqukethwe kokuphakelayo:
Inothi elilodwa, lokhu kuzolinganisa ukushaya, hhayi ababhalisile! Uma ufuna ukuzama ukukala Ababhalisile, ngincoma umcimbi wokuchofoza kusithonjana sakho se-RSS. Vele, lokho kuphuthelwa noma ngubani obhalisela ngemininingwane yokuxhumanisa kunhlokweni wakho… ngakho-ke ngobuqotho angizami nokuzama. Uma unemicabango ethile kulokho engikwenzayo noma ukuthi kungathuthukiswa kanjani, ngazise!
Tags: ngempumelelosebenzisa i-pinterestamanani wengeze-enqoleni yeselulaukuphrinta
Mar 29, 2009 ku-5: 22 PM
Awukwazanga ukusebenzisa i-feedburner.com? Njengoba iGoogle ithenge lezi zibalo kungenzeka zihlanganiswe neGoogle Analytics kungekudala… kulo nyaka ngiyethemba!
Mar 29, 2009 ku-5: 38 PM
Yebo, ngisebenzisa i-Feedburner njengamanje ukukala ukufinyelelwa kwami ​​kokuphakelwa. Kodwa-ke, angikuthandi ukubambezeleka kokushicilela ku-Feedburner futhi ngobuqotho ngizonda ama-analytics akuyo nokuthi ikubonisa kanjani ukukhula nokusetshenziswa.
Bengingakezwanga ukuthi babheke ukudonsa izibalo ze-Feedburner kuGoogle Analytics - kepha lokho kungaba kuhle!
Gcina okuthunyelwe kwami!
Mar 29, 2009 ku-9: 43 PM
Ngeke ngimangale uma i-GA ifaka lokhu ngokuzayo… kunengqondo kuphela ngoba iGoogle ingumnikazi we-Feedburner… futhi ngiyaqiniseka awuyena umuntu wokuqala ukuzama lokhu.
Mar 30, 2009 ku-12: 59 PM
Lokhu akuphuli imigomo yokusetshenziswa akunjalo? Ngingakuzonda ukuthola ukuthi ngivinjelwe ku-Google Analytics ngokusebenzisa amaseva abo ngendlela engeyona eyejwayelekile (okusho kusuka kwizicelo ze-Img).
Futhi uma beshintsha i-API yabo (isb.Ukuhleleka kwamapharamitha, inani lamapharamitha, njll.
Kungcono ukwenza lokhu nge-accont yokuhlola!
Jul 6, 2009 ngo-12: 15 PM